Mpanamboatra sy mpamatsy ny kaopy PET ambongadiny | Copak
Saron'ny Cup Cup
Orinasa COPAK any Shanghai., LTD dia orinasa matihanina amin'ny vokatra ara-nofo PET. Manam-pahaizana manokana amin'ny kaopy fisotro PET, kaopy gilasy PET, kaopy misy tsirony PET, fitoeran-tsakafo misy alikaola PET, kaopy ampahan'ny PET, tavoahangy PET sns. Azo antokaPET CUP LIDA dia omena avokoa ny vokatray ary mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ary manana laza malaza amin'ny tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao.
4. Fampiasana: PET CUP
5. fonosana: 1000PCS / CTN
Orinasa COPAK any Shanghai., LTD dia orinasa matihanina amin'ny vokatra ara-nofo PET. Manam-pahaizana manokana amin'ny kaopy fisotro PET, kaopy gilasy PET, kaopy misy tsirony PET, fitoeran-tsakafo misy alikaola PET, kaopy ampahan'ny PET, tavoahangy PET sns. Azo antoka fa omena ny PET CUP LIDA ny vokatrao rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra manara-penitra iraisam-pirenena ary manana laza malaza amin'ny tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao.
Izahay dia iray amin'ireo mpamatsy tsara indrindra ho an'ny PET CUP any Sina. Miaraka amin'ny atrikasa morden, fitaovana teknolojia avo lenta, tontolo iainana kanto sy milamina, ary rafitra fanaraha-maso kalitao henjana, ny kaopy sy tavoahangin-tsika PET dia naondrana erak'izao tontolo izao.
Ny orinasanay dia mitazona ny finoana ny "Fiaraha-miasa marina, kalitao tsara indrindra, serivisy tena tsara". Miezaka foana izahay manome vokatra sy serivisy tsara kokoa.
Manantena ny fifandraisana amin'ny orinasa miaraka aminao. Fiaraha-miasa mandresy fandresena izany.
Antsipiriany amin'ny rakotra:
Raha ny PET CUPsarony, izahay dia namolavola lamina maro amin'ny rakotra fisaka sy dôma. Ny savaivony dia miovaova amin'ny haben'ny 4.5mm, 6.2mm7.4mm, 7.8mm, ka 90mm sy 98mm sns. Ny savaivon'nySarony kapoaka PETdia miankina amin'ny haben'ny vavan'ny PET kaopy. Na inona na inona karazana nofidinao, dia mifanandrify tsara amin'ny sisin'ny horonan-tsarin'ny PET ihany izy rehetra. Ka tsy misy famoahana no antoka voalohany momba ny kalitao.
Tags tags: PET sarony kapoaka, PET CUP, mandresy mandrara fiaraha-miasa COOPERATION, TSY MISY LEAKAGE, CUCAM PET ICE CREAM
Teo aloha: Kaopy gilasy PET
Manaraka: Kira fanandramana PET
Cup Cup 16oz
Kaopy plastika mazava Crystal
Tompondakan'ny PET any Sina